Qajeelfama Babal'ate Banaa fi Dhaamaa jijjiiruu
Qajeelfama babal'ate ibsi bal'aan faankishinii sajoo murtaa'ee kenna, sanduuqa barruu yookiin baafata ajajaa yommuu qaree kee maalima sana irratti dhaabdu.
Qajeelfama Babal'ate banaa fi dhaamaa tti jijijjiiruuf:
Mallattoon filannoo qajeelfama babal'ate kakaasamuu agarsiisa.
Qajeelfama babal'ate yeroodhaaf jijjiiruuf:
Qajeelfama babal'atan altokko kakasuuf furtuuwwan qaxxaamuraa shift+F1 dhiibi.
Mallatoon gaaffii cinaa qaree hantuuteetti mul'ata. Ibsa ajajichaa argachuuf Qaree Hantuutee Gargaari to'annoowwan, sajoo fi ajajoota baafataa hundarra sochoosuu ni dandeessa.Qaree Hantuutee Gargaari yeroo itti aanu hantuutee cuqaastu ni dhaama.
Title is: Qajeelfama Babal'ate Banaa fi Dhaamaa jijjiiruu